Wasteland 3: nyowani dhata pane yekutamba-yekutamba vhidhiyo mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Wasteland 3 mutambo wevhidhiyo wakasimbiswa muna 2016, uye kubvira ipapo ruzivo rwakawanda pamusoro pake rwave kubuda. Gore iro, mushandirapamwe wekubhadhara vanhu wakaziviswa kuti ubhadhare chirongwa cheInXile Entertainment studio. Iye zvino ivo vakaburitsa turera nyowani yezvichave iri mutambo wevhidhiyo uyo uchave uripo kune akati wandei mapuratifomu, kusanganisira zvakare kune yako GNU / Linux distro.
Ndicho kutamba-mutambo wevhidhiyo mutambo wakaiswa mune post-apocalyptic nyaya. Anopfuura zana zana mabhomba, Arizona iri kufa. Patriarch weColorado akapikira kumununura kana Desert Ranger ikanunura nyika yake kubva kuvanakomana vake vatatu vane ropa. Mune ino tactical RPG, maRanger anofanirwa kuenda kuchamhembe kunovaka chigadziko chitsva, kushongedzera mota, kudzidzisa vanotora, kuongorora tsvina ine chando yeColorado, kusangana nevagari, uye kusarudza wekubatsira.
Mutambi achakwanisa kuzvinyudza mune iyi nyaya nekugadzirisa timu yehondo inopinda tendeuka-based kurwa. Mutambo wevhidhiyo unodzorwa mukutarisa kwepamusoro, uchiyeuchidza mimwe mitambo yemavhidhiyo senge Commandos, nezvimwe. Nenzira iyi iwe uchave unokwanisa kubata mauto uye iwe zvakare unopihwa mukana wekupinda muzvivakwa zvinoonekwa. Uye zvakare, mutambo uyu wakagadzirwa kuitira kuti pave nekukuvara kune zvakatipoteredza kana ichinge ichiridzwa kuti iite chaiyo. Verenga neimwe yakanaka chiito system uye mifananidzo yaro yakanaka. Iyo inokutendera iwe kuti utambe zvese zviri zviviri-kamwe-mutambo modhi kana neshamwari dzine multiplayer modhi.
Kana iwe uchida kuwana mamwe mashoko, unogona kutarisa webhusaiti yeiyi zvidzidzo zveNyika 3. Kubva ipapo iwe unogona kutoita pre-kutenga yemusoro uno. Kana iri zuva rekuburitswa, hazvisi pachena kuti richava rinhi, chete kuti rinouya imwe nguva muna 2020 yeWindows, Xbox One uye PS4. Pamwe, mwedzi mishoma gare gare chiteshi cheLinux chakasvika ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Wasteland 3: nyowani-yekutamba vhidhiyo mutambo data
Izvo zvakanaka kuti uone kuti kune akawanda uye akawanda mitambo yeLinux asi panguva imwechete pane mashoma uye mashoma emahara / emahara mitambo.
Huwandu hwemitambo yemahara / yemahara yemavhidhiyo haina kuderera. Muchokwadi, yakawedzerawo uye yakagadziridzwa maererano nehunhu. Iko kune enjini dzemagetsi seGodot kana mitambo inonakidza kwazvo senge O AD. Chii chinoitika ndechekuti akabhadharwa mavhidhiyo emitambo akawedzera zvakanyanya zvekuti akavhara emahara.
Microsoft ichasanganisira exFAT rutsigiro muLinux kernel
Iyo nyowani vhezheni yeiyo yakasarudzika vhidhiyo chikuva PeerTube 1.4 inosvika